शब्दकोश: मृत्युको गिलासमा जीवनको चुस्की
जीवनको आँखाबाट हेर्दा मृत्यु फिका चिया हो । न रङमा गाढापन, न स्वाद तिक्खर । अक्सर औषधी तीता र टर्रा हुन्छन् भनेर मान्ने हो जीवनको औषधि हो - मृत्यु । त्यहाँ पुगेर सब कुरा समाधान भए जस्तो समथर लागिदिन्छ, अरुको प्रस्थान हेर्दा । तर, जीवन यस्तो सिलसिला हो, जहाँ विशृंखलताहरु खप्टिएर बसेका हुन्छन् । त्यो खप्ट्याइमा मृत्यु उद्गम सत्य हो । यस्तो विसंगत जीवन बाँचिरहँदा कोही पहिलेदेखि नै मृत्युले छोइएर जीवनको पाती चढाइरहेका हुन्छन् । जगदीश घिमिरे त्यस्तै पूजारी बने ।
टाढाबाट हेर्दा जगदीश दाइलाई सधैं अहंकारले मोटाएको देख्थें म । घुलमिलमा रहनुपूर्वको हेराइ थियो त्यो । त्यसो त अन्तरंग सम्बन्धमा पनि म कहिल्यै झ्याम्मिइनँ उनीसँग । कसैसँग खुलेर झ्याम्मिन र आफूलाई पनि अरुसँग झ्याम्मिन दिन जाँगर खासै चल्दैन आफूलाई । परैबाट हेराहेर गर्दै तर्किएर टापुको जीवन जिइरहेको हुन्छु । यस्तो स्वभावलाई यथार्थबाट भागेको भने पनि हुन्छ, जीवन र सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हुतिहारा माने पनि हुन्छ । जे होस्, अन्तर्मुखी बचाइमा रहँदै सामाजिक भइदिनुमा तृप्ति छ । जगदीश दाइ पनि अन्तर्मुखी गायनमा रमाउने उस्ताद थिए ।
रुखो स्वभावका दाइको टर्रो मिजास रक्तक्यान्सर लागेपछि पनि उस्तै जवान रह्यो । पाँच वर्षअघिको प्रसंग हो - 'अन्तर्मनको यात्रा' कृतिमाथि काठमाडौंको मार्टिन चौतारीमा छलफल थियो । छलफलमै सहभागिता जनाउने सोचले चौतारीमै कार्यरत साथीसँग मागेर हतारिएर किताब पढेको थिएँ । छोटो समयमा असाध्यै छिटो गरी पढेको किताब त्यही हो । किताबबारे विभिन्न टीका-टिप्पणी ओइरिए छलफल कार्यक्रममा । मैले पनि एउटा प्रश्न गरिटोपलें । दाइबाट ठाडो र रुखो लबजमा जवाफ आयो । नमज्जा लाग्यो । तर, किताबले बेस्सरी छोएको थियो मलाई । किताबसँग बनेको दह्रो नाता लेखकका कारण फुस्किन सकेन ।
जगदीश दाइमाथि आरोप र आलोचनाको चाङ नै छ । अन्तर्मनको यात्राले २०६४ सालको मदन पुरस्कार पाएकाले पनि उतिबेला त्यो चाङ अझ बढेको हुन सक्छ । हामीकहाँ रिस र आरिसकै कारण होला, कुनै पनि क्षेत्रमा बाजी मारेको र अलिक सफल मान्छेलाई 'विनर स्टान्ड एलोन' को नियतिमा पुर्‍याइन्छ । एक हदसम्म बौद्धिक वर्गबाट पनि दाइले त्यो नियति बेहोरे । कतिपयको हेराइमा मदन पुरस्कारप्रति रहेको तिक्ततामा दाइ पनि परे । तर, असाध्य रोगसँग कुश्ती खेलिरहेको कुश्त ज्यानप्रति रहेको आमपाठकको संवेदना भावले दाइलाई प्रिय बनायो । त्यसभन्दा बढी प्रिय बनायो लेखनको शक्तिले नै ।
जगदीश घिमिरेबाट सिक्नुपर्ने कुरासँगै नसिक्नुपर्ने कुरा पनि छन् । दिवंगत व्यक्तिलाई आदर्श बनाएर सबैसबै कोणबाट सुकिलो देख्न बाध्य हुनुपर्ने केही छैन । गलत पाटोलाई सही रुपमा औंल्याउनु नै असली सम्मान हो । दाइलाई म सम्मान गर्छु ।
दाइले रिसाहाको विशेषण पाए । दम्भ र बडप्पन अँगालेको भन्दै आलोचनालाई निम्तो दिइरहे । राजसी ठाँट मन पराउँथे । आत्मपूजक उनी हुँदै हुन् । (त्यसमा तर म उनको आत्मविश्वास देख्छु ।) समग्रमा उनी पूर्ण मानव भएर जिए । जीवनको मदिरामा अलिकति कीरा नतैरिए के नै स्वाद ?
एक जमानामा 'लिलाम' र 'साबिती' जस्ता औपन्यासिक कृतिबाट सबल सर्जकमा दरिइसके पनि पछिल्लो समय चर्चामा ल्याएको 'अन्तर्मनको यात्रा' मा जगदीशले आफ्नै बडप्पनको बखान गरे भन्ने टीकाटिप्पणी सुनियो पाठकबीचमै । बिलौनाको व्यापार भने कतिपयले । त्यो कृति खासमा आत्मालाप नै थियो । उनको आफ्नो कुरा नै थियो । जीवन निल्न तम्सिएको क्यान्सरलाई किमोले लाटो बनाउने क्रममा उनले दुःख छल्दै लेखेको मृत्युको आँखाबाट गरिएको जीवनको बयान थियो त्यो कृति । किताब पढिरहँदा यस्तो लाग्यो, मृत्युको गिलासमा जीवनको चुस्की लिनमा मग्न छन् जगदीश । जीवनबोधको धरहरा के विधि खप्टिएका हुन् ! धरहराहरु खप्टिएर अर्कै धरहरा बनेको देखिन्छ, जसले अरुलाई पनि उँचो आकांक्षा लिएर बाँच्ने प्रेरणा सिञ्चित गर्छ । किताबमा उनले आफ्ना सफलता र उपलब्धिका किस्सा धित मारेर उल्लेख गरेका छन् । समाजसेवा अभियानका क्रममा रामेछापका पाखामा सजाएको सपनाका फूलहरुको बास्ना थियो किताबका पानाहरूमा । थियो र नै लेखे उनले । लेख्दालेख्दै बखान अलिक बढी हुन पनि गयो । अरुहरु उनको ठाउँमा भए मृत्युतिर धकेलिंदै गर्दा यमराजको प्रतिमा देखेर त्यसै अतालिन्थे/कहालिन्थे, उनले आफूले गनीगनी सास फेरिरहेको समाज र बस्तीकै परिवर्तनका रुपरेखा केलाए ।
हाम्रो साहित्यमा अग्रज र नयाँ पुस्ताबीच ठूलै फाटो छ । नयाँ पुस्ताले पुरानालाई 'बासी आइटम' भन्दै अनुकरणीय कुरा समेत सिक्नै नखोज्ने, सम्मानको संस्कारलाई पाइन्टमा प्वाल पारेर चुहाइदिने चलन छ । नयाँले पुरानालाई सधैं उही लिकमा चलेको बूढो रेल ठान्छन् । उता पुरानाले पनि नयाँलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने, आफूले लालमोहर लगाइदिएपछि मात्रै मूलधारको सर्जकका रुपमा मान्यता पाउने भने झैं नपत्याउने र उमेरसँग जोडेर रचनागत शक्तिलाई तुच्छ र लुरे साबित गरिदिने अवस्था छ । अग्रजहरु ठान्छन्, नयाँहरुले इतिहास र वर्तमानका गुदी ज्ञानबिना नवीन शैली नामको हावा महल ठड्याएका छन् ।
यो अवस्थामा मैले जगदीश दाइमा पुरानो मेसिनघरमा नयाँ पार्टपुर्जा भएको फ्युजन छवि पाएँ । खासगरी उनले सकस उपन्यासमा पुरानो किस्सालाई युवा जीवनशैलीको समेत छाप उतार्ने गरी नयाँपन दिएका छन् । उनले जीवन बुझेको, देश छामेको, इतिहास केलाएको र वर्तमानको चिन्तामा छटपटाएको पन्ना-पन्नामा देखिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने र सहन सक्ने साहस उनमा थियो । फेसबुकको अनलाइन दुनियाँमा हल्काफुल्का ठट्टादेखि देशै बदल्नेसम्मका गफ र सामाजिक अभियान छेडिएका बेला उनी प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्तासँग देश, राजनीति र आफ्नै कृतिको बारेमा अन्तक्रिया गरिरहेका देखिन्थे । कसैले आफ्नो किताबबारे सानो पनि टिप्पणी कतै लेखेको फेला पारेमा कृतज्ञतासहित उनी फेसबुकमा राख्थे । त्यतिबेला उनको अहंकार फु मन्तर भए झैं लाग्थ्यो । सायद टिप्पणीमा प्राप्त सराहना र तारिफले उचालिएर आत्मसम्मानको बोधले दाइले आफैंलाई पनि भुल्थे । उनी कृतज्ञ देखिन्थे ।
यही फेसबुक दुनियाँमा मैले कवि, लेखक, नाट्यकर्मी, कलाकार लगायतको तस्बिर खिचेर राखेको देखेपछि जगदीश दाइले मलाई ध्यान दिन थालेका रै'छन् । नत्र त लेखेर, बोलेर पनि अग्रजको आँखामा पर्न गाह्रो छ । पुरानो वानेश्वरको गुरुकुलमा २०६८ सालमा दाइको पनि तस्बिर खिचेर 'क्रियटर्स कर्नर' नामको सो फेसबुके एलबममा समेटेको थिएँ । तारालाल श्रेष्ठको 'शक्ति, स्रष्टा सबाल्टर्न' नामको किताब विमोचनको दिन थियो सायद त्यो तस्बिर खिचेको । दाइले भेटेपिच्छे नै तस्बिरहरुलाई अल्फावेटिक अर्डरमा र जन्ममिति तथा प्रकाशित कृतिहरुको सूची राखी फोटो एलबम व्यवस्थित गर्न सुझाइरहन्थे । अहिले नभ्याएको र चाँडै मिलाउँछु भन्ने खालका जवाफ दिन्थें म । आफ्नो अव्यवस्थित जिन्दगीको व्यवस्थापन गर्नु कि फेसबुकमा छरिएका फोटो मिलाउनु भन्ने अवस्थामा थिएँ म । दाइले त्यस्तो आग्रह गरिरहनुमा नेपाली साहित्य र कलाक्षेत्रका सर्जक र कलाकर्मीको पहिचान र सम्मान फैलियोस् भन्ने लोभ नै थियो उनको ।
जगदीश दाइले साझा किसिमको लोभ पालेका थिए । यस्तै लोभीहरुले भरियोस् मेरो समाज ! जहाँ अनुहार बिग्रेका र अनुहारै नभएकाहरुले पनि एउटा-एउटा मञ्च पाएर हाँस्न पाऊन् ।
(पहिलो पटक खसखस डटकममा प्रकाशित)
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, January 19, 2015
Labels: निबन्ध, संस्मरण
B.S. Chhetri November 16, 2015
सहि र सटिक विश्लेषण छ । Keep the flow !
B.S.Chhetri November 16, 2015
Nice write up indeed !